Dr Abiy: hal sano maxaa u qabsoomay? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka EBC
Image caption Rai'sal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed
Ra'isal wasaare Dr Abiy Axmed muddada halka sano uu xilka soo hayey tallaabbooyin wax ku ool ah ayuu qaaday, haddana dadbaa ku dhaliilaya iney weli jiraan howla waxqabad u baahan oo Raisul wasaaraha hortyaallo.
Tan iyo inta uu hoggaanka dalka Itoobiya uu qabtay Ra'isal wasaare Dr Abiy Axmed oo ay haatan hal sano u buuxsantay waxaa dalka Itoobiya ka socday isbeddello dhinacya badan taabanaya.
Maalma ka horna Ra'isul wasaaraha oo warbaahinta kala hadlay shacabka dalkaasi ayaa digniin adag u diray cid allaale ciddii fal sharci darra ah ka waddo dalka gudahiisa inay dowladda tillaabbo sharci ka qaadeyso.
Haddaba Ra'isal wasaare Dr Abiy Axmed oo hal sana hoggaanka dalka soo hayey wuxuu xafiiskiisa uu ku qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay xaaladda dalka uu ku sugan yahay, wuxuuna kaga hadlay waxa halka sano u qabsoomay iyo caqabadaha halka sano hortaagnaa inuu isbeddellada uu doonayey uu si xowli ah uu ku socdo.
Ra'isal wasaaraha mar uu arrintaasi ka hadlayey waxaa uu yiri "Sarreynta sharciga howla aad u badan ayaa noo qabsoomay inkasta oo ay jiraan arrima qaarkood oo u baahan wakhti badan in la geliyo balse aanu billaawnay"
"Tusaalooyinka wanaagsan ee aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah sarreynta sharciga sida aan uga hirgelinnay deegaanka Soomaalida, deegaankaasi oo ku sugnaa xaalad dalka intiisa kale ka duwan"
"Deegaankaasi wuxuu sameeystay 30,000 oo askari oo hubeysan haddii ay dowladda dhexe faregelin inta ay ku sameyso ay xukumaddi jirtay beddeli leheenna waxaaba dhici laheyd inuu deegaankaasi sawirka guud uu dalka Itoobiya leeyahay uu beddeli lahaa" ayuu yiri.
"Tallaabbooyinka aan ku hirgelinnay sarreynta sharcigana waxay sababtay iney dowladda gacanta ku soo dhagto 47 qof oo faldambiyeedyo kala duwan deegaankaasi ka geystay"
"Deegaanka Soomaalidana maanta wuxuu ka mid yahay deegaannada ugu deggan marka loo fiiriyo sidi hore uu ahaan jiray. Taasina waxay ka mid tahay tallaabbooyinka aan qaadnay si buuxdana ugu guuleysannay sanadkii hore" ayuu yiri Ra'isal Wasaare Dr Abiy Axmed.
"Sida oo kale dhibaatooyin ka dhacay qayba kala duwan oo dalka ka mid ah dadkii ku lug lahaa oo ay tiradooda 1,000 kor u dhaafeyso dacwad ayaa lagu soo oogay oo maxkamadeyntooda ayaa socota. Laba qof oo dil ku geystay magaalada Shaashamanne ee deegaanka Oromadana xabsi daa'im ayaa lagu xukumay."
Ra'sal wasaare Dr Abiy Axmed mar uu arrintaasi ka hadlayey waxaa uu yiri arrinta sheegashada dhulka marka ugu horreyso waxaa loo baahan yahay inaan fahanno dastuurka waxa uu ka yiri cid walbana waxaa loo baahan yahay iney taa maskaxda ku hayso.
"Dhulka dowladda ayaa iska leh qodob dastuuri ah ayaana si cad u dhigaya, marka su'aal kasta oo la xiriirto dhulka waxaan ku maareyneynaa si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federalka Itoobiya". ayuu yiri
"Ciddii dana siyaasadeed oo gaar ah ku dhex wadato arrintanna waxaan u sheegayaa iney gacmaha kala baxaan ka hor inta uu sharcigu qaban" ayuu yiri.
Image caption Dr Abiy oo warbaahinta xafiiskiisa kula hadlay
Mideynta ururrada ka wada tirsan xisbiga hoggaamiya waddanka Itoobiya ee EPRDF mar uu ka hadlayeyna wuxuu Ra'isal wasaaraha sheegay in loo saaray guddi arrintan si kama dambeys ah u soo darso xilliga ugu horreeya ee ay warbixintooda diyaar noqota ay soo hordhigayaan shirweynaha xisbiga.
Ra'isal wasaaraha oo si kooban uga jawaabay waxaa uu yiri "ururka qowmiyadda Oromada ee ODP iyo Ururka qowmiyadda Amxaarada ADP wararka sheegaya inuu khilaaf soo kala dhex galay waxba kama jiraan, sida ay sabab ugu noqdeen inuu dalka Itoobiya isbeddel siyaasadeed uu ka dhaco mustaqbalka dalkana waa ay ka wada shaqeeynayaan iyaga oo ka wada tirsan xisbiga talada dalka Itoobiya haya ee EPRDF".
Image caption Raisul wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed
Waana ku faraxsanahay inuu maanta deegaan weliba wixii uu raba inuu nagu taageero wixi aan ku kala duwannahayna uu nagu khilaafo muddada sanadka ah fufurnaanta siyaasadeed ee aan dalka ka hirgelinnay ayuu ka mid yahay" ayuu yiri.